Diabetes – Page 19 – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည်။ မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ဖြေ. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်သုံးချက်က ဒီရောဂါဟာ- (၁) ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ဖြစ်တယ်၊...
မေး ကျွန်မအမေ ဆေးခန်းမှာ သွေးပေါင်ချိန်တော့ ၁၄၀/၉၀ mmHg ကျော်ပေမယ့် အိမ်မှာကျတော့ အဲဒီလောက် မများပါဘူး။ သွေးပေါင်က ဆေးခန်းမှာ တိုင်းတာနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတာ အပြောင်းအလဲရှိတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ လုလုမေ၊ ကျောက်မြောင်း။ ဖြေ ...
ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည်။ မေး။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင် ၃၀ – ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ရင် သွေးတိုးရောဂါကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး။ . ကျွန်မအမေဆီးချိုရောဂါရှိနေတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမှသိရပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မတို့ က အမေ့အတွက်စိတ်ပူလို့ အစာကို အချိုမပါတာ သက်သက ်စီမံပေးတယ်။ အမေက ကျွန်မတို့စားသလိုပဲစားချင်နေတယ်။ အမေကကျွန်မတို့ မိသားစုဝင်တွေစားတဲ့အစာကို စားနိုင်ပါသလား ဆရာ။ လွင်မာဦး၊ ရွှေပေါက်ကံ။...